Home » Aha! Jokes, Satire » ဂဇက်သတင်း မနက်ခင်း
ကျောကျော ကျီးကျီး အွီးကျောင် နောက်ဒယ်
ဟုတ်တယ် log in ၀င်ပြီးမှတော့ ၁၅ ကျပ် ယူဦးမှ …
ပျံဖျက်ပေးဘာ.. ဟိုဘက်နဲ့ မှားတွားဒါ
ဟိဟိ…မမလည်း အဲလိုမှားပြီး မန့်ဘူးတယ်……….
Mt.Everest တက်ဖို့ စပွန်ဆာ သိန်း ၇၀၀ ရရင် ရောက်အောင်တက်လို့ရတယ်။ သေတာရှင်တာ နောက်တပိုင်းပေါ့ ။
Sherpa ကောင်းရင် ထမ်းတောင်တင်တယ် သိလား
ဒီ ထက် နာမည်ကြီးအောင် ကြောင်ကောက်ကောက်ဟင်း ချက်ကျွေးအူးမှပါ။
မြန်မာသတ်ပုံ သဒ္ဒါကျမ်း ပြင်ဆင်ရေးသားရန် ဦးကြောင်ကြီးအား ကော်ရက်ရှင်ဌာနတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည်…
နီ က ဒီ မှာ သူများ တွေ ကို သတင်းလုပ်ရေးနေ။
အဲလာကို ရေးတဲ့ “ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်” ဆိုတာ နာ့ အမျိုးဝုတ်ဘူးနော်။
၁၅ ကျပ်ဆိုလည်း မနည်းဘူးပေဘဲ။